Weriye C/raxmaan Max'ed Cali oo Muqdisho lagu aasay maanta kaddib markii la arkay isagoo qoorta laga jaray
Allaha u naxariistee Werriye C/raxmaan Maxamed Cali ayaa saakay lagu aasay magaalada Muqdisho, kaddib markii meydkiisa oo qoorta laga jaray la soo dhigay degaanka Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ehelada weriyaha, dilka weriyaha ayaan la ogeyn cida ka dambeysay iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in weriyaha uu tegay maalin kahor degaanka Suuqa Xoolaha si uu u soo salaamo hooyadii oo ku nool xaafad ka tirsan Suuqa Xoolaha.
Aaska Weriye C/raxmaan Maxamed Cali ayaa waxaa ka soo qeyb galay eheladiisa iyo dhammaanba asxaabtiisa, iyadoo waalidka weriyaha ay sheegeen in wiilkooda ay dileen gacmo ka gar daran, isagoo maalinta qiyaamahana laga jaazinayo qofkii falkaasi ka dambeeyay.
Dhinaca kale dadka degan goobta laga helay meydka weriye C/raxmaan Maxamed Cali oo u shaqeynayay Shabakadda Sports-ka ka hadasha ee lagu magacaabo www.ciyaarahamaanta.com ayaa si weyn uga walaacay falkaasi arxan darrida ah oo lagula kacay Weriyaha.
Weriyeyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday weriye C/raxmaan Maxamed Cali oo gacan ka gar daran ay ruuxiisa dhaafiyeen, waxaana dambaareyneynaa kooxihii ka dambeeyay falkaasi waxashnimada ah.